NgoNovemba 15, 2020, izindaba ezinkulu zafika futhi zaba ukugxila kwamazwe emhlabeni wonke. Ngemuva kwezingxoxo zeminyaka eyisishiyagalombili, abaholi bamazwe ayi-15, kufaka phakathi iChina, iJapan neSingapore, basayina isivumelwano se-RCEP ngenkomfa yevidiyo. Kuyafundwa ukuthi i-RCEP ngokuvamile ibhekisa ku-t ...
Njengohlelo lokulawula ukuvuleka okuvulekile, imoto ehamba kancane inobudlelwano obubalulekile nobuchwepheshe besimanje bolawulo lwedijithali. Kuhlelo lwamanje lokulawulwa kwedijithali lwasekhaya, i-stepper motor isetshenziswa kabanzi. Ngokubonakala kohlelo olugcwele lwe-digital AC servo, i-AC servo motor isetshenziswa kakhulu ku-digita ...
I-Stepper motor iyinto yokulawula i-open-loop eguqula isiginali ye-pulse kagesi ibe ukufuduka kwe-angular noma ukufuduka komugqa. Endabeni yokungagcwali ngokweqile, isivinini semoto, ukuma kwesimo kuncike kuphela kumvamisa wesiginali yesiginali nenombolo yokushaya, futhi akuthinteki ngoshintsho lomthwalo, th ...
I-Ac Stepper Motor, IHybrid Stepper Motor, Kuvaliwe I-Loop Stepper Motor Driver, Izintambo ezihamba nge-Wire ze-6, 220 Volt Ac Servo Motor, IServo Motor Actuator,